တတိယခြေလှမ်း အခြေခံ XSL – MYSTERY ZILLION Blog
Posted on September 29, 2010 December 24, 2011 by minlwin
XMLရဲ့ Tagများသည်　အချက်အလက်တွေရဲ့အဓိပ္ပါယ်များနှင့်၊　ထူးခြားချက်များကိုဖော်ပြပေးနိူင်ပါသည်။　ယခင်အခန်းများတွင်　ဖော်ပြပြီးခဲ့သလို　XMLသည်အချက်အလက်များကို　ဖော်ပြရန်အတွက်　Tagများကို　လွတ်လပ်စွာ　အသုံးပြုနိူင်ပေ၏။　ထို့အတွက်　HTMLကဲ့သို့　ပိုင်ဆိုင်တဲ့Tagတွေအသီးသီးကို　မည်သို့ဖော်ပြမည်　ဆိုသည်ကို　ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိပေ။သို့ရာတွင် XMLအချက်အလက်များကို　ပြင်ဆင်ပြီးလှပစွာ　ပုံဖော်လိုကြမည်　မဟုတ်ပေလော။　XMLရဲ့　အချက်အလက်များကို　ဘယ်လိုစည်းမျဉ်းဖြင့်　ပုံစံဖော်မည်ဆိုသည့်　လုပ်ဆောင်ချက်သည်　လိုအပ်လာပေသည်။　ထိုတာဝန်များကို　ထမ်းဆောင်ပေးနေသည်မှာ　XSL ဖြစ်ပေသည်။　XSLဆိုသည်မှာ　Extensible Style sheet Languageရဲ့အတိုကောက်အခေါ်အဝေါ်　ဖြစ်ပြီး၊　XMLစာပိုဒ်များ၏ Styleကိုသတ်မှတ်ပေးနိူင်သော　ပညာရပ်တစ်ခု　ဖြစ်၏။
XSLသည်　XMLရဲ့တည်ဆောက်ပုံကို　ပြောင်းလည်းပေးသော　XSLT (XSL Transformations)၊ XMLစာပိုဒ်　များ၏　အစိတ်အပိုင်းအတိအကျကို　ရှာဖွေနိူင်သော XPath (XML Path Language) နှင့်၊　အမြင်ပိုင်း　ဆိုင်ရာ Styleကိုဖော်ပြပေးနိူင်သော　XSLFO (XSL Formatting Objects)　အစရှိသည့်　နည်းပညာရပ်များဖြင့်　ဖွဲ့စည်း　ထားပါသည်။　XSL၏XSLFOသည်　HTML၏CSSကဲ့သို့　နေရာတွင်တည်ရှိပေသည်။　ဤတတိယခြေလှမ်းတွင် XSLTကိုအသုံးပြု၍၊ XMLအချက်အလက်များကို　Web Browser များတွင်　ဖော်ပြနည်း　များကို　တင်ပြသွားမည် ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် XSLFOမှာ　CSSဖြင့်အစားထိုးအသုံးပြုနိူင်သဖြင့်　ဤအခန်းတွင်　အကျဉ်းချံုး　ဖော်ပြသွားမည် ဖြစ်သည်။
XSLသည် XMLစာပိုဒ်များကို XSLအသုံးပြုတဲ့Fileအပေါ်မှုတည်ပြီး XSL processorက တည်ဆောက်ပုံကို　ပြောင်းလည်းပေးခြင်းအားဖြင့် အခြားသောဖွဲ့စည်းပုံအချက်အလက်များ အဖြစ်ပြောင်းလည်းပေးနိူင်ပါသည်။ ဥပမာ　အားဖြင့် XMLစာပိုဒ်အား HTMLသုံးXSLကိုအသုံးပြုပါက HTMLအချက်အလက်အဖြစ် ပြောင်းလည်းပေးနိူင်သလို၊　PDFသုံးXSLကိုအသုံးပြုပါက PDFအချက်အလက်များအဖြစ် ပြောင်းလည်းပေးနိူင်ပါသည်။
XSL Processorသည်အတော်များများသော　Internet Exploreတွင်　ပါရှိပါသဖြင့်၊　ဤအခန်းတွင်ဖော်ပြသော　နမှုနာများကို　Internet Exploreကိုအသုံးပြု၍　လက်တွေ့လေ့လာသွားမည်ဖြစ်သည်။
XPath သည်XSLမှ XMLစာပိုဒ်အတွင်းမှ အချက်အလက်များ၏　နေရာအတိအကျကို　ဆက်သွယ်ရာတွင်　အသုံးပြုရာတွင်　အသုံးပြုသောစနစ်တစ်ခုဖြစ်၏။　XPathမပါဝင်ပဲ XSLကိုအသုံးပြုနိူင်မည်　မဟုတ်ပေ။XPath　သည်လည်း XMLကဲ့သို့ပင်　သစ်ပင်ဖွဲ့စည်းပုံဖြင့်　တည်ဆောက်ထားပါသည်။　XMLနှင့်　ကွာခြားသည်မှာ Elementအဆင့်မဟုတ်ပဲ၊　Nodeအဆင့်ဖြင့်　သစ်ပင်ဖွဲ့စည်းပုံကို　ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။
Xpathတွင်XML၏　Element, Attributeနှင့်တန်ဖိုးများကို　သီးခြားNodeတွေအဖြစ်　သတ်မှတ်　ထားပေသည်။　Nodeအမျိုးအစားများကို　အောက်ပါအတိုင်း၄မျိုးခွဲခြား　ထားပါသည်။
XMLစာပိုဒ်များတွင်　မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော　တစ်ခုတည်းသော　Nodeဖြစ်ပြီး၊　သစ်ပင်ဖွဲ့စည်းပုံ　၏ပင်မနေရာတွင်တည်ရှိသော　Nodeဖြစ်ပါသည်။　အမြဲတမ်း　/ ဟုဖော်ပြလေ့ရှိပြီး၊　Node　တွေအားလုံး၏　ပင်မြစ်ဖြစ်ပေသည်။　Root Node၏အောက်တွင်　အမြဲတမ်းRoot Element　တစ်ခုတည်ရှိပေမယ့်　ထိုElementနှင့်　Root Nodeတို့သည်　သီးခြားNodeများဖြစ်ကြ　ပါသည်။
XMLစာပိုဒ်များ၏　Elementအမည်တွင်　နေရာကျပေလိမ့်မည်။　အထက်ပါဥပမာတွင်　company, employee, name, branchအစရှိသည့်　Nodeများသည်　Element Nodeများ　ဖြစ်ကြပါသည်။
XMLစာပိုဒ်များ၏　Attributeများ၏နေရာတွင်　တည်ရှိပေသည်။　အထက်ပါဥပမာတွင် Age သည် Attribute Nodeဖြစ်၏။
XMLစာပိုဒ်များ၏　Text Valueများသည်　Text Nodeများဖြစ်ကြ၏။
Xpathတွင်Nodeတစ်ခုရဲ့　အချက်အလက်ကိုဆက်သွယ်အသုံးပြုနိူင်ရန်　ထိုNodeရဲ့　တည်နေရာ　ကို　ဖော်ပြပေးဖို့လိုအပ်ပါသည်။　Nodeတစ်ခု၏နေရာကိုဖော်ပြရာတွင်　Nodeတစ်ခုနှင့်　တစ်ခု　အကြား　/ ကိုကြားခံ၍　ဖော်ပြရပါမည်။　ထိုသို့ဖော်ပြချက်ကို　နေရာဖော်ပြချက်(Location Path) ဟု　ခေါ်ပါသည်။　Nodeတစ်ခု၏　တည်နေရာကိုဖော်ပြပုံမှာ　၂မျိုးခွဲခြားနိူင်ပါသည်။　XMLစာပိုဒ်　တစ်ခုလုံး၏　နေရာအတိအကျကိုဖော်ပြပေးသော　အတိအကျနေရာ(Absolute Location Path )နှင့်၊　လက်ရှိNodeမှ၊ ရောက်ရှိလိုသောNodeကိုညွှန်ပြသော　နှိုင်းယှဉ်နေရာ (Relative Location Path)ဟူ၍ရှိပေသည်။
အတိအကျနေရာ　(Absolute Location Path)
Root Nodeနေရာမှ　ဆက်သွယ်လိုသောNodeအထိလမ်းကြောင်းကို　အတိအကျနေရာဟု　ခေါ်ပါသည်။ Diagram 3.2.1တွင်　name Node၏အတိအကျနေရာ　ဖော်ပြချက်မှာအောက်ပါ　အတိုင်းဖြစ်သည်။
နှိုင်းယှဉ်နေရာ　(Relative Location Path)
Nodeတစ်ခုမှ　အခြားသောNodeတစ်ခု၏　နေရာကိုနှိုင်းယှဉ်၍　ဖော်ပြရာတွင်အသုံးပြု　ပါသည်။　Node၏အပေါ်တွင်ရှိသောNodeကို Parent Node ဟုခေါ်ပြီး၊　အောက်တွင်ရှိသော　Nodeကို Child Node ဟု ခေါ်ပါသည်။သား၏သားNode များသည် Grand Child Node များဖြစ်ကြပါသည်။ ဤကဲ့သို့အခေါ်အဝေါ်များကို XPath Axesဟုခေါ်ပါသည်။
attribute ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်သောAttribute Nodeများအားလုံး
child ကိုယ်၏သားအဆင့်ရှိChild Nodeများအားလုံး
preceding ကိုယ်၏အရှေ့မှ Nodeများအားလုံး
တဖန်XPathတွင်　အတိုကောက်စာလုံးများကိုလည်း　အသုံးပြုနိူင်ပေသည်။　အသုံးပြုနိူင်　သော　အတိုကောက်စာလုံးများမှာ　အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
အတိုကောက် သက်မှတ်နိူင်သော Node များ
Diagram3.2.1၏　ဥပမာကိုကြည့်ပါ။　လက်ရှိNodeသည်　companyဖြစ်မည်ဆိုလျှင် Name Nodeကိုဖော်ပြရာတွင်　အောက်ပါအတိုင်းရေးသားနိူင်ပါသည်။
အကယ်၍လက်ရှိNode၏အောက်တွင်　အမည်တူNodeများတည်ရှိပါက　အောက်ပါအတိုင်း　ဖော်ပြရပါမည်။
Diagram3.2.1၏ company nodeတွင် child nodeနှစ်ခုရှိပါသည်။　ဥပမာအားဖြင့်　မင်းလွင်　အမည်ရှိသော　Node သည်　employee  ဖြစ်၍၊　စည်သူဟုအမည် nodeကိုပိုင်ဆိုင်သော　node သည်　employee ဖြစ်သည်။
အခြားသော　ပရိုဂရမ်ဘာသာရပ်များကဲ့သို့　0မှအစမပြုသည်မှာ　သတိထားစရာအချက်　တစ်ခုဖြစ်သည်။
XMLစာပိုဒ်တစ်ခု၏　အချက်အလက်များကို　ဘယ်လိုပုံစံဖြင့်ဖော်ပြပါမည်ဆိုတဲ့　အချက်အလက်များကို　ရေးသားထားခြင်းကို　Style Sheet ဟုခေါ်ပါသည်။　ထိုStyle Sheet၏　File Typeသည် .xslဟုရေးသားဖို့လိုအပ်　ပါသည်။　သို့ရာတွင်　Style Sheetကိုယ်တိုင်လည်း　XMLရေးသားပုံအတိုင်း　ရေးသားထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။　ဦးစွာလက်တွေ့ရေးသားကြီးပြီး　ဘယ်လိုရေးသားရသည်ကို　ရှင်းလင်းသွားပါမည်။
အထက်ပါ book.xmlတွင်အသုံးပြုသော　Style Sheetသည်အောက်ပါ book.xslဖြစ်၏။
အထက်ပါ book.xmlကို　Internet Exploreဖြင့်　ဖွင့်ကြည့်မည်ဆိုလျှင်　အောက်ပါအတိုင်းတွေ့မြင်ရပေမည်။
<?xml-stylesheet href="book.xsl" type="text/xsl"?><book-list><book><name>Head First Java</name><price>$ 25.00</price></book><book><name>Effective Java</name><price>$ 42.09</price></book><book><name>Head First Design Patterns</name><price>$ 29.00</price></book></book-list>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" ><xsl:template match="/">
Style Sheet ကိုထည့်သွင်းအသုံးချခြင်းအောက်ပါအတိုင်းတွေ့မြင်ရပေမည်။
အထက်ပါ book.xml၏　ဒုတိယမြောက်စာကြောင်းသည်　XMLစာပိုဒ်အတွင်းတွင်　XSLကိုအသုံးပြုပါမည်　ဟုသတ်မှတ်ချက်ပေးနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။　ထိုစာကြောင်းကိုရေးသားခြင်းအားဖြင့်　XMLစာပိုဒ်တွင်　အသုံးပြုမည့်　Style Sheet ကိုသတ်မှတ်ပြီး　ဖြစ်စေပါသည်။　ရေးသားပုံမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
Style Sheet အတွင်းမှရေးသားချက်များ
တဖန် Style Sheet ဖြစ်တဲ့　book.xslကိုလေ့လာကြည့်ကြပါဆို့။　xslသည်လည်း　XMLစာပိုဒ်တစ်မျိုးဖြစ်သည့်　အတွက်　ပဋ္ဌမစာကြောင်းသည်　XML Declaration ဖြစ်ပါသည်။　ဒုတိယစာကြောင်းမှစ၍　XML Instance ဖြစ်ပြီး　stylesheet Tagဖြင့်　အစပြုထားပေသည်။
Namespace Uri အဖြစ် http://www.w3.org/1999/XSL/Transform ကိုအသုံးပြုပြီး၊ prefix အဖြစ်　xslကို　အသုံးပြုထားပါသည်။　ထိုစာကြောင်းသည်　XSLTကိုရေသားရာတွင်　မရေးမဖြစ်ရေးသားရမည်ဖြစ်၏။　တနည်း　ဆိုသော်　Stylesheet Element သည်　XSLT၏　Root Elementအဖြစ်　မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။　ထိုမှတဆင့်　ရေးသားလိုသော　Style ကို　Child Elements များအတွင်း　ရေးသားရမည်ဖြစ်သည်။
1. Template Rule
စာကြောင်း　နံပါတ်၃မှ　၁၇အထိသည်　Template စည်းမျဉ်း များဖြစ်ကြ၏။　Template စည်းမျဉ်း ဆိုသည်မှာ　XML၏အပိုင်းတစ်ခုကို　ဘယ်လိုပုံစံပြောင်းရမည်ဟု　သက်မှတ်ထားသော　စည်းကမ်းများ ဖြစ်ကြ၏။ စာကြောင်းနံပါတ်၃သည်　root nodeရဲ့ဖော်ပြပုံပုံစံကို　သတ်မှတ်နေ၏။　တဖန်စကြောင်း　၁၂မှစ၍　book node၏　ဖော်ပြပုံဖြစ်၏။　Template Rule Tag၏ရေးသားပုံမှာ　အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်၏။
<------　root node <------　single node Template Tag၏ match attributeသည်　လက်ရှိTemplateတွင်အသုံးပြုမည့် nodeကို Xpathရေးသားပုံ　ဖြင့်　သတ်မှတ်ရပါမည်။　book.xslတွင် root node နှင့် book nodeအသီးသီးကို　စာကြောင်း၃နှင့်၁၂တွင်　သတ်မှတ်ထားပါသည်။ 2. Template Ruleကိုအသုံးချခြင်း
book.xsl၏　စာကြောင်းနံပါတ်၈ကို　ကြည့်ပါ။　ထိုစာကြောင်းတွင်　booklist/book Elementအတွက်　Template Ruleကို　အသုံးပြုနေပါသည်။
ဤစာကြောင်းသည်　Root Node ၏ Templateစည်းမျဉ်း　အတွင်းရေးသားထားပါသဖြင့်　Root Nodeကို　Context Nodeအဖြစ်အသုံးပြုပြီး　အသုံးပြုမည့် Nodeများ　ကို　ရည်ညွှန်း၍ဖော်ပြရပါသည်။
Book Elementl၏　Templateစည်းမျဉ်းများသည်　စာကြောင်း၁၂မှ　၁၇အထိရေးသားထားပြီး　XSLTက　HTMLအဖြစ်　ပုံစံပြောင်းလိုက်သောအခါ　အောက်ပါအတိုင်းပြောင်းလည်းသွားမည်　ဖြစ်သည်။
<!-- ဤနေရာမှ　Book Node၏ Template စည်းမျဉ်းတွင်သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်းဖြစ်၏　-->
book.xml ၏ Book Nodeများအား　အထက်ပါစည်းမျဉ်းအတိုင်း　ပုံစံပြောင်းပေးမည်　ဖြစ်သည်။　book.xml၏　စာအုပ်၃အုပ်လုံးသည်　အထက်ပါစည်းမျဉ်းအတိုင်းပုံစံပြောင်း နေသည်ကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
3. Text Nodeများကိုအသုံးပြုခြင်း
book.xsl၏　စာကြောင်း၁၄နှင့်　၁၅ကိုကြည့်ပါ။　value-of Tag ကိုအသုံးပြုပြီး　XMLစာပိုဒ်၏　Text Node များကို　ပုံစံပြောင်းပေးနေပါသည်။　XMLစာပိုဒ်အတွင်းမှ　select attribute တွင်သတ်မှတ်ထားသော　Text Nodeအမည်ရှိသော　Node များ၏တန်ဖိုးများအား　ဤTagအတွင်းတွင်　သက်မှတ်ထားသော　စည်းမျဉ်းအတိုင်း　ပုံစံပြောင်းပေးရမည်ဖြစ်၏။
4. xsl: Prefix မဟုတ်သော Tag များ
Template စည်းမျဉ်းအတွင်း　xslနှင့်အစမပြုသော　အစိတ်အပိုင်းများသည်　ပုံစံပြောင်းရန်မလိုအပ်သော　အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်ပြီး၊　ရေးသားထားသည့်အတိုင်း　ပုံစံပြောင်းပြီးသောစာပိုဒ်အတွင်းတွင်　ပါဝင်ဖော်ပြ　သွားမည်ဖြစ်သည်။
XPathတွင်　xmlအချက်အလက်များကို　လိုအပ်သလို　တွက်ချက်အသုံးပြုနိူင်ရန်　Functionများစွာ　ရှိကြပါသည်။　အောက်ပါနမှုနာဖြင့်　XPath Functionများ၏အသုံးပြုပုံကို　ဖော်ပြသွားပါမည်။
book.xsl၏　စာကြောင်းနံပါတ်၉ကိုကြည့်ပါ။　select attributeတွင် count(booklist/book) ဟုရေးသား　ထားပါသည်။　ထိုစာကြောင်းတွင် count function ကိုအသုံးပြုပြီး၊ booklistထဲမှစာအုပ်များကို　ရေတွက်　နေပါသည်။
book.xsl၏ စာကြောင်းနံပါတ်၂၀ကိုကြည့်ပါ။　select attributeတွင် sum(booklist/book/price) ဟုရေးသား　ထားပါသည်။　sum function ကိုသုံးပြီး　စာအုပ်စျေးနှုန်း　စုပေါင်းစျေးနှုန်းကို　တွက်ယူ　နေပါသည်။
More … Download PDF
Previous PostPrevious How to learn web development – 2
Next PostNext UITableView Tutorial